4 Xannibaada Maalinta Xadgudubka Maalintii kahor Turjubaanka Nabadda Nabadda Waa La Qabtay | RayHaber | raillynews
HomeGUUD4 Codsi Xayiraadda Maalintii Kahor Turkiga Codsi Aaminsiineed Nabadeed
Xayiraadda turkiga kalsoonida maalinlaha ah ka hor ayaa la qabtay si loo hirgaliyo nabada
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga ee Içiii, Taliyaha Guud ee Ciidamada Gendarmerie iyo cutubyada Taliska Ilaalada Xeebaha ee dalka guud ahaan Turkiga Codsiga Nabadda ee Kalsoonida ayaa isku mar la qabtay May 21 08.00-24.00.
Ficil ahaan, ka hor xaddidaadda bandoowga 4-ta maalmood ee la dhaqan-galinayo inta lagu jiro Ciidul-Fitriga; Tallaabooyin la qaaday si loola dagaallamo nooca cusub ee coronavirus (Covid-19) ayaa la kormeeray.
Intii lagu gudajiray howsha xisaabinta, waxaa la hubiyay in goobihii shaqada ee xirnaa si aan rasmi aheyn loo fuliyay go'aanka, iyo in goobaha shaqada, oo saacadooda shaqadu dib loo habeeyay, ay u shaqeeyeen waqtiyo cayiman.
Intii lagu guda jiray howsha hanti dhowrka, waxaa la hubiyay in muwaadiniinta sugaya gudaha iyo banaanka safafka meelaha shaqooyinka sida suuqyada wadooyinka, Bakhaarada, xarumaha shidaalka lagu qasbay inay xiraan masaafada bulshada iyo maaskaro, suuqyada ayaa u hogaansamaya qawaaniinta aqbalaada macmiilka, iyadoo 10 qof 1kiiba XNUMXm².
20 sano ayaa lagu xaddidayaa codsiyada halka bandoow lagu soo kormeeri lahaa lix iyo 65 sano iyo muwaadiniinta waayeelka ah inay u hogaansamaan go'aanadooda.
53 kun 896 shaqaale ayaa kaqaybqaatay arjiga
8 kun 392 shaqaale ah iyo 53 eeyaha wax baadha ayaa ka qeyb qaatay dalabka, kaasoo lagu fuliyay 896 kun iyo 217 dhibcood. Hawsha ayaa si isku mid ah looga fuliyay waddanka oo dhan, 743 qof ayaa doonayey in laga aqoonsado dadka la wareystay, 31 ayaa la xiray.
Qaabsocodka Garsoorka iyo Maamulka ayaa loo adeegsaday 3 kun 930 qofood oo aan u hoggaansamin fogaanta bulshada
Maamulka iyo talaabooyinka garsoorka waxaa lagu dabaqey 2 shaqsiyaad ah, oo ay kujiraan 260 marka laga yimaado xad gudubka sharciga masaafada bulshada, 20 oo kayar da'da 1.384, iyo 65 da sano 286 iyo ka kor. 3 kun 930 baabuur ayaa la hubiyay, 159 kun 694 milkiileyaal / darawal ayaa lasiiyay ganaax maamul.
Ficil ahaan, 1.396 gawaarida ayaa laga mamnuucay taraafikada, 5 gawaarida la xaday ayaa la ogaadey, 43 darawalna way ka noqdeen.
10 kun 254 beero-beero, 4 kun 938 goobo-socod oo socod lug leh iyo 103 kun 785 goobo shaqo oo la kormeeray.
Ganaaxyada maamulka iyo garsoorka ayaa lagu soo rogay wadarta 17 goobo shaqo, 18 waxay ku xadgudbeen sharciga xiritaanka aan xadidneyn, 115 waxay shaqeynayaan wixii ka baxsan saacadaha shaqada ee la cayimay, iyo 150 sharci aan la adeegsanaynin.
Intaa waxaa dheer, 5 qori oo aan laysan, 25 qori oo aan ruqsad lahayn, 2 bistoolaad madhan ah, 254 rasaas ah, 4 goyn / qalab goos goos ah, 5 joornaalada bastooladaha ah iyo googooyo kala duwan, 23 g xashiishad, 4 g heroin, 101 g Bonzai, 23 g methamphetamine, 25 jaranjarada, 101 daawooyinka isku darka, 15.850 baakadood oo sigaar ah baxsad ah iyo 30 litir oo cabitaan / baxsanaya ah ayaa la qabtay.
Xanibaada Maalintii Codsiga 'Xannibaada Nabada ee Turkey' Waa la qabtay
Yildiray Kocarslan ayaa qiray Trust
Erciyes'da Shuftadu waxay noqon doontaa Amaan
Guddoomiyaha Ururka Tareenada Dareemayaasha Xaqiijiyay
Wasiir Yildirim Marmaraha ayaa u sheegay furitaanka Marmaray
Wasaaradda Ganacsiga iyo Isgaarsiinta,